စံရှမေောငျ ၊သို့မဟုတျ၊ လကျနကျခြ ရကပ ကြားတဈကောငျ (အပိုငျး နှဈ) – Kyaw Zaw Oo's Blog
April 10, 2013 March 13, 2019 kyaw zaw oo
စဈတှေ ၊ ၁၀ ဧပွီလ ၂၀၁၃ ၊ Coral Arakan News ၊ [ အခနျးဆကျ အတ်ထုပတ်တိ ]
[ ဤအခနျးဆကျ အတ်ထုပတ်တိ၏ ဇာတျကောငျဖွဈသူ ဘကွီး ဦးစံရှမေောငျ (အသကျ ၇၆-နှဈ) မှာ ၂၀၁၃-ခုနှဈ ဧပွီလ (၈) ရကျနေ့ မှနျးလှဲ လေးနာရီခှဲအခြိနျတှငျ လူကွီးရောဂါဖွငျ့ ၄ငျး၏ ဘူးသီးတောငျမွို့နအေိမျ၌ ကှယျလှနျသှားခဲ့ပါသညျ။ ကှယျလှနျခြိနျတှငျ ညီဖွဈသူ ဒေါကျတာအေးခမျြး၊ ညီမဖွဈသူ ဒျေါကြော့မေ နှငျ့ အခွားသော ညီအဈကိုမောငျနှမမြား၊ သား ကိုငွိမျးခမျြးဦး၊ ဇနီး ဒျေါကှနျမေ၊ သမီး မစောရှငျမေ၊ သား ကိုအောငျသနျးထိုကျ တို့ ကနျြရဈကွပါသညျ။]
ဗမာအလံနီအဖွဈမှ ရခိုငျအလံနီအဖွဈသို့ အသှငျပွောငျးခနျး
တဈခါတလေ တဈညလုံး စာရှကျတှေ လိုကျကပျကွရတာရှိတယျ။ ကိုယျ့အိမျရှေ့၊ ကိုယျ့အိမျအနီးအနား နရောတှလေညျးပါတာပေါ့။ မနကျကရြငျ ကိုယျ့အဒျေါအိမျပျေါကို ပွနျရောကျလာပွီး မခုတျတတျတဲ့ ကွောငျလိုလို နနေတောပေါ့လေ။ အဒျေါ မနကျပိုငျး အပွငျကပွနျလာလို့ ဟေ့ ဟိုနရောတှမှော အလံနီ ကွငွောစာရှကျတှကေပျထားတယျ၊ ဘယျသူလကျသရမျးသှားသလဲမသိဘူးဆိုပွီး အဒျေါပွောတဲ့အခါကရြငျ၊ ဟုတျလား အဒျေါ၊ ဘယျကအကောငျတှေ လကျသရမျးသှားသလဲမသိဘူး ဆိုပွီး ကိုယျသံယောငျလိုကျတတျသေးတယျ။ ဖဆပလ အမတျရဲ့ သားဖွဈတဲ့ ကိုယျ့ကို အလံနီလှုပျရှားမှုတှမှော ပါလိမျ့မယျလို့ ဘယျသူကမှ ထငျမထားကွဘူးလေ။
တက်ကသိုလျရောကျတော့ ဆရာဝနျလိုငျးဘကျကို လိုကျလို့ရအောငျ pre-medical ဘာသာတှဲတှေ ယူခဲ့သေး တယျ။ ဒါပမေဲ့ တဈခြိနျလုံး အလံနီပါတီလှုပျရှားမှုတှမှော ဟိုနရောကပါ ဒီနရောကပါ လုပျနလေတေော့ အတနျးတှေ တဘုနျးဘုနျးကတြယျ။ အတနျးတှအေောငျလာပွနျတော့လညျး ဆေးလိုငျးမီတဲ့ အမှတျရမလာဘူး။
စာမေးပှဲတှကေတြော့ ပညာသငျထောကျပံ့ကွေးတှေ ဆကျမရတော့ဘူး။ အလံနီ အရောငျ အသှေး ကလညျး တရဲရဲ ဖွဈနတေော့ ကိုယျ့အဖေ ဖဆပလ အမတျက တျောတျော အမွငျကတျလို့နဲ့တူပါတယျ။ ငှတှေေ ဆကျမပို့တော့ဘူး။ ဒါနဲ့ ကိုယျတျောတျော ဒုက်ခရောကျလိုကျရသေးတယျ။ ရခေဲရရေောငျးတဲ့အခါလညျး ရောငျးရတယျ။ တက်ကစီမောငျးတဲ့အခါ မောငျးလိုကျ ၊ လေးဘီးမောငျးတဲ့အခါမောငျးလိုကျ လုပျရတယျ။ ဒိုငျနာကားတဈစီးကို ပုတျပွတျငှားပွီး ဆှဲတဲ့အခါလညျး ဆှဲရတာပေါ့။ ရနျကုနျမှာ ပပေတေတေေ နရေစဉျ ကာလအတှငျး တတျအားသမြှသော သမ်မာအာဇီဝနညျးလမျးတှနေဲ့ ကွိုးစားငှရှောပွီး အသကျဆကျခဲ့တယျ။
အဲသညျအခြိနျမှာ ဆငျစှယျရှာ လူသတျမှုဖွဈလာတယျ။ ဆငျစှယျရှာဆိုတာ ထီးလငျးမွို့နယျက ရှာတဈရှာပေါ့။ အလံနီပါတီကို အရမျးထောကျခံအားပေးတဲ့ ရှာတဈရှာပေါ့။ ဖွဈခငျြတော့ ပါတီက ဆေးမှူးတဈယောကျဟာ ရှာအိပျရှာစား တျောတျော ပြျောတတျပုံရတယျ။ ရှာကို အရောကျအပေါကျ ရှာမှာ အနအေစား တျောတျောမြားတယျတဲ့။ မိမိနဲ့ အလှမျးသငျ့တာက တဈရှာလုံးပမေယျ့လို့ ကိုယျနဲ့ မတညျ့တာက တဈယောကျတညျးဖွဈနရေငျတောငျမှ ဒုက်ခရောကျတတျတာကိုး။ အဲသညျ တဈဦးတညျးသော မကျြမုနျးကြိုးသူ က အစိုးရဘကျကို လကျတို့လိုကျတော့၊ အစိုးရတပျတှရေောကျလာပွီး ကိုယျတို့ရဲ့ ပါတီဆေးမှူးကို သတျပဈ ပါလရေော။ (ဓါတျပုံပါ မှတျစုကို ကွညျ့ပါ။)
ဒါနဲ့ အလံနီခေါငျးဆောငျတှကေလညျး အကွီးအကယျြ ဒေါသထှကျပွီး လကျစားပွနျခတြောပေါ့။ ရဲနီကြျောဝငျး ဦးဆောငျတဲ့အဖှဲ့ကို လှတျလိုကျတယျ။ တဈရှာလုံးက ယောကငြ်ျားသားတှကေို ကွိုးတဈခြောငျးစီ ယူလာခိုငျးပွီး၊ ရှာပွငျထှကျခိုငျးတယျ။ သူတို့ကွိုးနဲ့ သူတို့ကို ခညျြပွီးမှ ရှာသားတှကေို ကှပျမကျြတာလို့ဆိုတယျ။ ရှာလုံးကြှတျပဲ။ မိနျးမတှေ၊ ကလေးတှေ နဲ့ သကျကွီးရှယျအိုတှကေလှဲလို့ပေါ့။
ဒီဆငျစှယျရှာလူသတျမှုကွောငျ့ ဖဆပလ အစိုးရအတှကျ ၀ါဒဖွနျ့ခြိရေးလုပျဖို့ အကှကျကောငျး ရသှားပွီး၊ အလံနီပါတီအတှကျတော့ ကြျောမကောငျး ကွားမကောငျး နာမညျပကျြစရာဖွဈသှားတယျ။
ဒါနဲ့ ဒီဖွဈရပျနဲ့ ပတျသကျလို့ သဘောထားထငျမွငျခကျြ စာတမျးတှေ ပို့ပါ ဆိုတော့ . . . ကိုယျကလညျး လူငယျပဲကိုး၊ ကိုယျ့စိတျထဲမှာ ရှိတဲ့အတိုငျး ဟောဟောဒိုငျးဒိုငျး ရေးပို့ပေးလိုကျတယျ။ ဒါဟာ . . . ပါတီက မှားတာပဲ လို့ . . . ။ ကိုယျ့ဘကျက လုပျရမှာက အဲသညျဆေးမှူးလိုမြိုး ရှာအိပျရှာစား ဘဝငျတှမေ့နကွေဖို့ ပညာပေးရမယျ၊ ဘာ ညာ ပေါ့ . . . ။
ဒါနဲ့ ဘယျပွောကောငျးမလဲ။ ဌာနခြုပျက စာထှကျလာတာပေါ့။ ကိုယျမှတျမိသေးတယျ။ “ပုံစံကိုက တောသူကွီးသား လသေံမြိုးနဲ့ . . . ။ . . . ဒီလိုအမွငျမြိုးသညျ တျောလှနျရေးကို သစ်စာဖောကျခွငျး တဈမြိုးဖွဈ သညျ။ . . . ။” ဘာဘာညာညာပေါ့။ ကိုယျ့ကို ပွနျလညျဝဖေနျထားတာ။ “ရဲဘျော . . . ၊ (တောကွီးတနျး) တောငျပိုငျးခရိုငျမှနေ၍ အမွနျဆုံးခြီတကျလာပါ” ဆိုပွီး ကိုယျ့ကိုဆငျ့ချေါတယျ။ ကိုယျကလညျး အငျး . . . အသတျခံရတော့မှာပဲ . . . လို့တှေးမိပွီး ကိုယျမသှားဘူး။ နောကျတဈကွိမျ ဆငျ့ချေါစာလာတယျ။ ကိုယျမသှား ပွနျဘူး။ ဒါနဲ့ သခငျစိုးက ကိုယျ့ကို အဝေးရောကျသဒေဏျ ခမြှတျလိုကျတယျ။ ပါတီဝငျတှေ အနနေဲ့ ကိုယျ့ကို တှရေ့ငျတှတေဲ့နရောမှာ ကှပျမကျြပဈကွဖို့ပေါ့။ ဒါနဲ့ ကိုယျလညျး ကိုယျ့မိတျဆှပေါတီဝငျတှကေိုလညျး ကိုယျက အကပျမခံတော့ဘူး။ သူတို့လညျး ကိုယျ့ကို ဘာမှတော့ မလုပျကွပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ကိုယျလညျး သခငျစိုးရဲ့ သဒေဏျပေးခံရတဲ့ ပါတီဝငျတဈယောကျ အနနေဲ့ အလံနီပါတီနဲ့ ကငျးကှာခဲ့ရတယျ။
၁၉၅၈-ခုနှဈမှာ ကိုယျ အိုငျအတေနျး အောငျတယျ။ အိုငျအတေနျးပွီးတော့ နောကျ နှဈနှဈလောကျ အတနျးမတကျ စာမေးပှဲမဖွဘေဲ နခေဲ့တယျ။ ၁၉၆၃-ခုနှဈမှာ ကိုယျကြောငျးပွီးတယျ။ ကြောငျးပွီးကတညျးက သမဝါယမဦးစီးဌာနမှာ အလုပျဝငျလုပျတယျ။ ဒီကွားထဲအတောအတှငျးမှာ ကိုယျ့ရဲ့နိုငျငံရေးအဆကျအသှယျ တှကေ မပွတျမတောကျဘဲ လှုပျရှားမှုတှအေတှငျးမှာ ရှိနခေဲ့တယျ။ သခငျစိုးတို့ဆီကခှဲထှကျလာတဲ့ ရခိုငျပွညျကှနျမွူနဈပါတီရဲ့ မွို့ပျေါယူဂြီနဲ့ နိုငျငံခွားဆကျသှယျရေးတာဝနျခံအဖွဈလှုပျရှားနခေဲ့တယျ။ ၁၉၆၆-ခုနှဈမှာ ကိုယျတဈခါ အဖမျးခံရတယျ။ အဖမျးခံရတဲ့အထိ သမဝါယမဌာနရဲ့ ဝနျထမျးအဖွဈ ကိုယျရှိနခေဲ့တယျ။
ရနျကုနျမှာနရေတယျဆိုတော့ ရခိုငျသားပမေယျ့လို့ ဗမာအမြိုးသမီးတှနေဲ့ အနနေီးတော့ ကွိုးခငျြးထား ကွိုးခငျြးငွိ ဆိုသလို နီးစပျဖူးတယျ။ ဗမာအမြိုးသမီးတှနေဲ့ ညားလုညားခငျ ညားလုညားခငျနဲ့ ဝေးခဲ့ရတာတှေ ရှိခဲ့ဖူးတယျ။
အဲဒီအထဲကတဈယောကျကတော့ ဟိုစဉျက သိပျနာမညျမကွီးသေးတဲ့ ရုပျရှငျမငျးသမီး တဈယောကျပေါ့။ ကိုယျက သူရုပျရှငျရိုကျတာကို မကွိုကျဘူး။ သူက ကိုယျ နိုငျငံရေးလုပျနတောကို မကွိုကျဘူး။
မငျးရုပျရှငျမရိုကျပါနဲ့တော့လား ဆိုတော့ ကြှနျမ အကယျဒမီတဈဆုရတဲ့အထိ အောငျမွငျအောငျ လုပျခငျြတယျ။ အကယျဒမီတဈဆုရရငျတော့ ရုပျရှငျဆကျမရိုကျတော့ပါဘူးလို့ ဆိုတယျ။
ရှငျ နိုငျငံရေးမလုပျပါနဲ့တော့လား၊ ဘှဲ့ရပွီးတဲ့အခါ ဝနျထမျးဘဝ အရာရှိဘဝနဲ့ တငျ့တောငျ့တငျ့တယျ အခွတေကလြေးနကွေတာပေါ့ ဆိုရငျ ကိုယျက မဖွဈနိုငျဘူးလို့ဖွတေယျ။ ကိုယျ့လူမြိုးက ကြှနျဖွဈနတေဲ့ ဥစ်စာ ၊ ကိုယျက ဘယျလိုလုပျ လကျပိုကျကွညျ့နနေိုငျမှာတုနျးလို့ ဘကွီးက ဖွတေယျ။
ဒါနဲ့ တိုတိုပွောရရငျ ကိုယျတို့နှဈယောကျလမျးခှဲကွတယျလို့ပဲ ဆိုပါတော့ကှာ။ နောကျပိုငျး သူလညျး အိမျထောငျရကျသားကြ၊ ကလေးတှေ ဘာတှေ ထှနျးကား၊ အတညျတကဖြွဈသှားတော့ ကိုယျလညျးဝမျးသာရတာပေါ့။
ဒီခတျေပိုငျး ဂြာနယျလဈတခြို့က သူ့ကို အငျတာဗြူးလုပျတာ ကိုယျဖတျရတယျ။ သူတို့က မေးကွတယျ။ အကယျဒမီတဈဆုရပွီးနောကျပိုငျး အမဘောကွောငျ့ ရုပျရှငျဆကျမရိုကျတော့တာလဲ တဲ့ . . . ။
အမေ လူတဈယောကျကို တဈခါက ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ ကတိတဈခု ရှိလို့ပါ . . . တဲ့။
၁၉၅၆-ခုနှဈ အောငျမာဃ ထိုးစဈအတှငျးမှာ အလံနီဌာခြုပျကို ထိုးစဈဆငျတာကို ခံရပွီးနောကျပိုငျး၊ အလံနီဌာနခြုပျ ဟိုပွောငျး သညျရှေ့ တရှရှေ့နေဲ့ ရခိုငျမှာ အခွစေိုကျတယျ။ အလံနီဌာနခြုပျဆိုတာ ဘာလဲ လို့ အဓိပ်ပါယျဖှငျ့ရရငျ သခငျစိုး စခနျးခြ နထေိုငျတဲ့နရောဟာ အလံနီဌာနခြုပျပါပဲ။
တဈခကျြလှတျ သတျမိနျ့ပေးဖို့ ဘယျတော့မှ နှုတျမနှေးတဲ့ သခငျစိုးရဲ့လကျအောကျမှာ ရခိုငျအလံနီရဲဘျော တျောတျောမြားမြား ဟိုတဈခါ သညျတဈယောကျ ဆိုသလို အသတျခံကွရတယျ။ “လူမြိုးရေးအမွငျကဉျြးဝါဒီတှေ” ၊ “ပစ်စညျးမဲ့ အာဏာရှငျဝါဒကို ဆနျ့ကငျြတဲ့သူတှေ” အစရှိတဲ့ စကားလုံးကွီးကွီးတှေ သုံးပွီး ကှပျမကျြခံရတယျ။ သုတျသငျခွငျးခံရတယျ။
ဒီတော့ နောကျဆုံး ရခိုငျရဲဘျောတှကေလညျး ဆကျလကျ သညျးညဉျးမခံနိုငျတော့ဘူး။ ကိုမောငျဟနျဟာ လူ(၄၀) လကျနကျ(၄၀) လောကျကို ဦးဆောငျပွီးတော့ ပေါကျတောမွို့နယျ ဖဒူကြှနျးကို ပွောငျးရှအေ့ခွစေိုကျတယျ။ သူ့အနနေဲ့ ဘာဆကျလုပျရမှနျး အသအေခြာတော့ မသိဘူး။ ဒါပမေဲ့ သခြောတာတဈခုကတော့ သခငျစိုးရဲ့ အလံနီကှနျမွူနဈပါတီကနေ ခှဲထှကျလာတာပဲ။ ဖဒူကြှနျးမှာ သူ့မိနျးမနဲ့ မိနျးမဆှမြေိုးတှေ ရှိတော့ ဒီနယျကို အခွခေံမယျ ဆိုပွီး သူပွောငျးလာတာ။
သခငျစိုးရဲ့ ရခိုငျလူမြိုးတပညျ့ရငျး ရဲနီကြျောဇံရှီရယျ၊ ရခိုငျရဲဘျော ခွောကျယောကျရယျပဲ ဌာနခြုပျမှာကနျြခဲ့တယျ။ ရဲနီကြျောဇံရှီက သခငျစိုးကို ကွောကျကွောကျနဲ့ ဖြောငျးဖရြတယျ။ “ဆရာကွီး . . . ၊ မောငျဟနျ က လူငယျဆိုတော့ စိတျမွနျ လကျမွနျနဲ့ တဇှတျထိုးလုပျတတျလို့ အခုလိုဖွဈသှားရတာပါ။ ဒါပမေဲ့ ကြှနျတျောက စိတျရှညျလကျရှညျနဲ့ ပွောပွရငျ သူတို့လကျခံကွမှာပါ” ဆိုပွီး သခငျစိုးကို နားသှငျးတယျ။ အေး . . . ၊ မငျးသှားပွီး ပွနျလာဖို့ချေါလို့ ရနိုငျပါ့မလား။
အေး မငျးသှားပွီး သူတို့ကို နားခခြျေါလာခဲ့။ လိုတဲ့လူတှေ ချေါသှား . . . ဆိုတော့ ဌာနခြုပျမှာ ကနျြခဲ့တဲ့ ရခိုငျရဲဘျော ခွောကျယောကျကို ချေါပွီး၊ ရဲနီကြျောဇံရှီ ဖဒူကြှနျးကို ပေါကျခလြာပါလရေော။ ဒါပမေဲ့ ရဲနီကြျောဇံရှီတို့အုပျစုကို ကိုမောငျဟနျတို့က တှတေ့ာနဲ့ ၀ိုငျးထားပွီး သနေတျနဲ့ ခြိနျထားတော့တာပါပဲ။ “ရပျ။ ဘာမှ ထှလေီကာလီ လြှောကျပွော မနနေဲ့။ ခငျဗြားကို သခငျစိုးလှတျလိုကျတာပဲ ဖွဈရမယျ။ ခငျဗြားက သခငျစိုး လူပဲ” စသညျဖွငျ့ တားဆီးပွီး ရနျရှာတော့တာပါပဲ။
အဘိုးကွီး ရဲနီကြျောဇံရှီက အလောတကွီး ရှငျးပွရတယျ။ “ဟေ့ . . . မောငျဟနျရေ . . . ၊ နပေါဦးကှ။ ငါတို့လညျး ဌာနခြုပျမှာ ဆကျနရေငျ သခငျစိုးသတျလို့သရေတော့မယျ။ မငျးတို့လူငယျတှေ ထှကျသှားတော့ ငါက တဈပတျလှညျ့နဲ့ လှတျလိုကျတာလို့ သခငျစိုးက မထငျဘဲ နပေါ့မလားကှ။ ဒါနဲ့ ငါလညျး သခငျစိုးကို အယုံသှငျးပွီး အသာကလေး လဈလာရတာ” လို့ ရှငျးပွရတယျ။
ဒီလိုနဲ့ ရခိုငျဘကျကို ရောကျနတေဲ့ အလံနီကှနျမွူနဈပါတီဟာ ရခိုငျ-ဗမာ နှဈခွမျးကှဲပွီးတော့ ရခိုငျပွညျကှနျမွူနဈပါတီ (Arakan Communist Party) ဆိုတာ ပျေါပေါကျလာတယျ။ ရဲနီကြျောဇံရှီက လူကွီးဆိုတော့ သူ့ကိုပဲ ခေါငျးဆောငျတငျရတာပေါ့။ ခေါငျးဆောငျပိုငျးထဲက လူငယျတှဖွေဈကွတဲ့ ကိုမောငျဟနျတို့ ကိုရှသောတို့ကလညျး ဘကွီးကို လှမျးဆကျသှယျတယျ။ (ကိုမောငျဟနျက ရသတေ့ောငျမွို့နယျ သမီးလှရှာသား၊ ကိုရှသောက အရငျတုနျးက ရခိုငျသောတုဇနအဖှဲ့မှာ ပါဖူးတယျ။) သူတို့ကပွောတယျ။ ကိုယျ့လူရေ . . . ကှနျမွူနဈဝါဒနဲ့ အမြိုးသားရေးဝါဒကို ပေါငျးစညျးဆောငျရှကျကွဖို့ အခြိနျကောငျးကို ရောကျလာပွီ။ သူတို့နဲ့ လကျတှဲပါပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ ကိုယျလညျး ရခိုငျပွညျကှနျမွူနဈပါတီ (A.C.P. ၊ဒါမှမဟုတျ၊ ရကပ) ရဲ့ နိုငျငံခွားဆကျသှယျရေးကို တာဝနျယူရတဲ့ မွို့ပျေါ ယူဂြီခေါငျးဆောငျဖွဈလာတယျ။ (ရခိုငျပွညျကှနျမွူနဈပါတီအကွောငျးကို ဓါတျပုံပါ မှတျစုတါငျကွညျ့ပါ။)
၁၉၆၆-ခုနှဈမှာ ကိုယျ ယူဂြီလုပျနတောကို အုပျမိသှားလို့ အဖမျးခံရတယျ။ ထောငျလေးနှဈလောကျကတြယျ။ ထောငျကလှတျလာတော့ စိုကျပြိုးရေး မှေးမွူရေးလုပျငနျးတှလေုပျပွီး ကိုယျ့ဘဝကို ပွနျလညျတညျဆောကျဖို့ ကွိုးစားခဲ့ဖူး သေးတယျ။ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ မအောငျမွငျခဲ့ဘူး။
ဘကွီး ပတမဆုံးခခြဲ့တဲ့ ဥယြာဉျစိုကျခငျးဟာ ဘူးသီးတောငျဘောလုံးကှငျးနားမှာပေါ့။ နာနတျ၊ လိမ်မျော၊ ရှောကျ အစရှိသညျအားဖွငျ့ စိုကျတယျ။ ကွကျမှေးမွူရေးလညျးလုပျတယျ။ ဒါပမေဲ့ အဲဒီတုနျးက ဒသေအုပျခြုပျရေးအရာရှိဖွဈတဲ့ ဘူးသီးတောငျ မလကဥက်ကဌ ဗိုလျကွီးအောငျဖွူက ဒီခွံကှကျဟာ မွို့ပွဧရိယာထဲမှာ အကြုံးဝငျနတေယျ၊ ဒါကွောငျ့ စိုကျပြိုးမှေးမွူရေး မလုပျရဘူး ဆိုပွီး အကွောငျးကွားတယျ၊ တားမွဈတယျ၊ ရာဇသံပို့တယျနဲ့ . . . နောကျဆုံးတော့ ကိုယျလညျး ထားလိုကျပါတော့ကှာ ဆိုပွီး ခွံကို ဖကျြတယျ။ နာနတျသီးတှကေို အကုနျခုတျပွီး ယူခငျြတဲ့လူ လူပတေော့ ဆိုပွီး ခြောငျးနားမှာ ပဈထားလိုကျတယျ။ ကိုယျ့ဆီမှာ အလုပျလုပျတဲ့ ကုလားလေးဆိုရငျ အဲသညျနကေ့ ထိုငျငိုနလေိုကျတာ ပွောမနနေဲ့တော့ . . . ။ သူနဲ့ ကိုယျနဲ့ နှဈဦး လုပျအားထညျ့ပွီး ပြိုးထောငျလာခဲ့တဲ့ ခွံကိုးကှ။ ကိုယျ့မှာလညျး လုပျငနျးဆုံးရှုံးတယျ။ သူ့မှာလညျး အလုပျဆုံးရှုံးတယျ။ နှဈဦးစလုံး အတူ ဆုံးရှုံးတာကတော့ ကိုယျ့လကျကိုယျ့ခွနေဲ့ ပြိုးထောငျလာခဲ့တဲ့ အသီးအပှငျ့တှကေို ဆုံးရှုံးဝကတာပါပဲ။ ဝမျးနညျးတာပေါ့။
ပွီးတော့ နောကျတဈခါကတြော့ ရသတေ့ောငျမွို့နယျ စတေီပွငျမှာ စိုကျပြိုးမှေးမွူရေးလုပျဖို့ အားထုတျပွနျတယျ။ ကိုယျ့ညီမ မကြော့စိနျက စတေီပွငျကြေးရှာမှာ သူနာပွုအနနေဲ့ တာဝနျကတြယျ။ ကိုယျက အဲသညျရှာမှာ ရဲစခနျးနဲ့ ဓါးလှယျခုတျက ခြောငျးကမျးစပျနရောကို မကျြစိကမြိတယျ။ ကိုယျက ရနျကုနျ သာကတေမှာလညျး ဘဲမှေးမွူရေးလုပျဖူးတယျ။ ရတေကျရကေရြှိတဲ့နရောဆိုရငျ ဘဲမှေးရတာ အဆငျပွတေယျ။
ဒါနဲ့ ကိုယျလညျး အဲသညျနရောမှာ ဘဲမှေးမွူရေးနဲ့ ခွလှေမျးစပွနျတယျ။ ဒါပမေဲ့ သိပျမကွာပါဘူး။ အတိုကျအခိုကျက ပျေါလာပွနျတော့တယျ။ အဲသညျရှာမှာက ပွောကျကြားအလငျးဝငျတဈယောကျရှိနတေယျ။ ကိုယျဟာ ကိုယျ့ညီမကတဈဆငျ့ ပတျဝနျးကငျြကြေးရှာတှကေ အလံနီတှနေဲ့ ဆကျသှယျနပေါတယျ ဆိုပွီး အဲဒီလူက ရဲစခနျးကို တိုငျတယျ။ ဒီတော့ အဲသညျက ရဲတှကေ ကိုယျ့ကို လာပွောကွတယျ။ “ဆရာရယျ . . . ၊ ဆရာနရောပွောငျးပွီး အလုပျလုပျရငျကောငျးမယျ ထငျပါတယျ” လို့ ဆိုလှာပွနျတယျ။ အနီးအနားက ကြေးရှာတှမှော အလံနီတှေ ရှိနတေ၃ာလညျး အမှနျပဲ။ ကိုယျကလညျး အလံနီလူထှကျ ဖွဈနတောကလညျး အမှနျပဲ။ ဒီတော့ ရှငျးရခကျနတောပေါ့။
ရဲစခနျးကရှငျးပွတာက ဒီလိုပါ။ ဆရာရယျ၊ အဲသညျပုဂ်ဂိုလျက အခုလောလောဆယျ ကြှနျတျောတို့ကို တိုငျနတောဆိုတော့ တျောသေးတယျ။ နောကျပိုငျး မွို့ကိုသာ သှားတိုငျရငျ ကြှနျတျောလညျး ရှငျးရခကျတော့မှာ . . . ဆိုပွီး ပွောပွတယျ။ ဒါနဲ့ နောကျတဈကွိမျ ကိုယျ့လုပျငနျးကို ဖကျြရပွနျတယျ။
နောကျဆုံးမှာတော့ စဈတှမြွေု့ပျေါ ပွနျတကျပွီး ကြူရှငျဆရာဖွဈရတော့တာပါပဲ။ စဈတှေ မောလိပျရပျကှကျ သုံးထပျတိုကျဟောငျးကွီးရဲ့ အပျေါဆုံးထပျ လေးလှာမှာ စာပွပွနျတယျ။ စဈတှမှော တိုကျတှရှေားတဲ့ခတျေက သုံးဆငျ့တိုကျ လို့ လူတှကေ ချေါကွတဲ့ အဆောကျအအုံပေါ့။ (အဲသညျ သုံးထပျတိုကျမှာ ကြှနျတျော အသကျ ဆယျ့သုံးနှဈသားအထိ နခေဲ့တယျ လို့ စာရေးသူက ကွားဖွတျဝငျပွောပါတယျ။)
တောမှာနတေုနျးက အကောငျးသား၊ စဈတှကေို ကြောငျးဆရာဘဝနဲ့ ရောကျလာတော့မှ နိုငျငံရေးအလုပျနဲ့ ထဲထဲဝငျဝငျ ဖွဈသှားပါလရေော။ ဒီမှာက ကိုယျ့လူတှကေို အုံနဲ့ကငျြးနဲ့ ပွနျတှရေ့တာကိုး။ လှုပျရှားမှုတှကေ မြားလှနျးတော့ အစိုးရက တခြို့အခြိတျအဆကျတှကေို မိသှားရာကနေ ကိုယျ့အနနေဲ့ ယူဂြီဘဝနဲ့တောငျ မနနေိုငျတော့ဘဲ ထှကျမပွေးရငျ မရတော့တဲ့ အခွအေနဆေိုကျလာတယျ။ ဒါနဲ့ ၁၉၇၂-ခုနှဈမှာ ဘကွီး ပွနျလညျ တောခိုခဲ့တယျ။ မငျးသူငယျခငျြး ကိုယျ့သားဦးလေး ငွိမျးခမျြးဦး သုံးလသားအရှယျမှာ ဘကွီးလညျး မလှဲမရှောငျသာ တောခိုခဲ့ရပွနျတယျ။
ငွိမျးခမျြးဦးရဲ့အမကေ ကိုယျ့ရဲ့ ပထမအိမျထောငျပေါ့။ ကိုယျတောခိုနစေဉျကာလမှာ ငွိမျးခမျြးဦးအမကေ နောကျအိမျထောငျပွုသှားခဲ့တယျ။ ကိုယျတော့ အပွဈမတငျခငျြပါဘူး။
ဘကွီးတို့ ရခိုငျလူမြိုး မွနျမာလူမြိုးတို့ အဖို့မှာ အမြိုးသမီးတဈယောကျ အိမျထောငျပွုတယျဆိုတာ အားကိုးအားထားရာ ရှာကွတဲ့ သဘောပဲလေ။ ကိုယျအိမျထောငျပွုလိုကျတဲ့လူက အားကိုးအားထားပွုလို့မရတဲ့အတှကျ အားကိုးအားထားနောကျတဈယောကျရှာသှားတာကိုတော့ ဘကွီးခှငျ့လှတျပါတယျ။
(အပိုငျး-သုံးကို ဆကျလကျ ဖတျရှုပါရနျ)
စံရွှေမောင် ၊သို့မဟုတ်၊ လက်နက်ချ ရကပ ကျားတစ်ကောင် (အပိုင်း နှစ်)
စစ်တွေ ၊ ၁၀ ဧပြီလ ၂၀၁၃ ၊ Coral Arakan News ၊ [ အခန်းဆက် အတ္ထုပတ္တိ ]
[ ဤအခန်းဆက် အတ္ထုပတ္တိ၏ ဇာတ်ကောင်ဖြစ်သူ ဘကြီး ဦးစံရွှေမောင် (အသက် ၇၆-နှစ်) မှာ ၂၀၁၃-ခုနှစ် ဧပြီလ (၈) ရက်နေ့ မွန်းလွဲ လေးနာရီခွဲအချိန်တွင် လူကြီးရောဂါဖြင့် ၄င်း၏ ဘူးသီးတောင်မြို့နေအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါသည်။ ကွယ်လွန်ချိန်တွင် ညီဖြစ်သူ ဒေါက်တာအေးချမ်း၊ ညီမဖြစ်သူ ဒေါ်ကျော့မေ နှင့် အခြားသော ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၊ သား ကိုငြိမ်းချမ်းဦး၊ ဇနီး ဒေါ်ကွန်မေ၊ သမီး မစောရှင်မေ၊ သား ကိုအောင်သန်းထိုက် တို့ ကျန်ရစ်ကြပါသည်။]
ဗမာအလံနီအဖြစ်မှ ရခိုင်အလံနီအဖြစ်သို့ အသွင်ပြောင်းခန်း
တစ်ခါတလေ တစ်ညလုံး စာရွက်တွေ လိုက်ကပ်ကြရတာရှိတယ်။ ကိုယ့်အိမ်ရှေ့၊ ကိုယ့်အိမ်အနီးအနား နေရာတွေလည်းပါတာပေါ့။ မနက်ကျရင် ကိုယ့်အဒေါ်အိမ်ပေါ်ကို ပြန်ရောက်လာပြီး မခုတ်တတ်တဲ့ ကြောင်လိုလို နေနေတာပေါ့လေ။ အဒေါ် မနက်ပိုင်း အပြင်ကပြန်လာလို့ ဟေ့ ဟိုနေရာတွေမှာ အလံနီ ကြေငြာစာရွက်တွေကပ်ထားတယ်၊ ဘယ်သူလက်သရမ်းသွားသလဲမသိဘူးဆိုပြီး အဒေါ်ပြောတဲ့အခါကျရင်၊ ဟုတ်လား အဒေါ်၊ ဘယ်ကအကောင်တွေ လက်သရမ်းသွားသလဲမသိဘူး ဆိုပြီး ကိုယ်သံယောင်လိုက်တတ်သေးတယ်။ ဖဆပလ အမတ်ရဲ့ သားဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်ကို အလံနီလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါလိမ့်မယ်လို့ ဘယ်သူကမှ ထင်မထားကြဘူးလေ။
တက္ကသိုလ်ရောက်တော့ ဆရာဝန်လိုင်းဘက်ကို လိုက်လို့ရအောင် pre-medical ဘာသာတွဲတွေ ယူခဲ့သေး တယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချိန်လုံး အလံနီပါတီလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ဟိုနေရာကပါ ဒီနေရာကပါ လုပ်နေလေတော့ အတန်းတွေ တဘုန်းဘုန်းကျတယ်။ အတန်းတွေအောင်လာပြန်တော့လည်း ဆေးလိုင်းမီတဲ့ အမှတ်ရမလာဘူး။
စာမေးပွဲတွေကျတော့ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးတွေ ဆက်မရတော့ဘူး။ အလံနီ အရောင် အသွေး ကလည်း တရဲရဲ ဖြစ်နေတော့ ကိုယ့်အဖေ ဖဆပလ အမတ်က တော်တော် အမြင်ကတ်လို့နဲ့တူပါတယ်။ ငွေတွေ ဆက်မပို့တော့ဘူး။ ဒါနဲ့ ကိုယ်တော်တော် ဒုက္ခရောက်လိုက်ရသေးတယ်။ ရေခဲရေရောင်းတဲ့အခါလည်း ရောင်းရတယ်။ တက္ကစီမောင်းတဲ့အခါ မောင်းလိုက် ၊ လေးဘီးမောင်းတဲ့အခါမောင်းလိုက် လုပ်ရတယ်။ ဒိုင်နာကားတစ်စီးကို ပုတ်ပြတ်ငှားပြီး ဆွဲတဲ့အခါလည်း ဆွဲရတာပေါ့။ ရန်ကုန်မှာ ပေပေတေတေ နေရစဉ် ကာလအတွင်း တတ်အားသမျှသော သမ္မာအာဇီဝနည်းလမ်းတွေနဲ့ ကြိုးစားငွေရှာပြီး အသက်ဆက်ခဲ့တယ်။
အဲသည်အချိန်မှာ ဆင်စွယ်ရွာ လူသတ်မှုဖြစ်လာတယ်။ ဆင်စွယ်ရွာဆိုတာ ထီးလင်းမြို့နယ်က ရွာတစ်ရွာပေါ့။ အလံနီပါတီကို အရမ်းထောက်ခံအားပေးတဲ့ ရွာတစ်ရွာပေါ့။ ဖြစ်ချင်တော့ ပါတီက ဆေးမှူးတစ်ယောက်ဟာ ရွာအိပ်ရွာစား တော်တော် ပျော်တတ်ပုံရတယ်။ ရွာကို အရောက်အပေါက် ရွာမှာ အနေအစား တော်တော်များတယ်တဲ့။ မိမိနဲ့ အလွမ်းသင့်တာက တစ်ရွာလုံးပေမယ့်လို့ ကိုယ်နဲ့ မတည့်တာက တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေရင်တောင်မှ ဒုက္ခရောက်တတ်တာကိုး။ အဲသည် တစ်ဦးတည်းသော မျက်မုန်းကျိုးသူ က အစိုးရဘက်ကို လက်တို့လိုက်တော့၊ အစိုးရတပ်တွေရောက်လာပြီး ကိုယ်တို့ရဲ့ ပါတီဆေးမှူးကို သတ်ပစ် ပါလေရော။ (ဓါတ်ပုံပါ မှတ်စုကို ကြည့်ပါ။)
ဒါနဲ့ အလံနီခေါင်းဆောင်တွေကလည်း အကြီးအကျယ် ဒေါသထွက်ပြီး လက်စားပြန်ချေတာပေါ့။ ရဲနီကျော်ဝင်း ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကို လွှတ်လိုက်တယ်။ တစ်ရွာလုံးက ယောင်္ကျားသားတွေကို ကြိုးတစ်ချောင်းစီ ယူလာခိုင်းပြီး၊ ရွာပြင်ထွက်ခိုင်းတယ်။ သူတို့ကြိုးနဲ့ သူတို့ကို ချည်ပြီးမှ ရွာသားတွေကို ကွပ်မျက်တာလို့ဆိုတယ်။ ရွာလုံးကျွတ်ပဲ။ မိန်းမတွေ၊ ကလေးတွေ နဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကလွဲလို့ပေါ့။
ဒီဆင်စွယ်ရွာလူသတ်မှုကြောင့် ဖဆပလ အစိုးရအတွက် ၀ါဒဖြန့်ချိရေးလုပ်ဖို့ အကွက်ကောင်း ရသွားပြီး၊ အလံနီပါတီအတွက်တော့ ကျော်မကောင်း ကြားမကောင်း နာမည်ပျက်စရာဖြစ်သွားတယ်။
ဒါနဲ့ ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ သဘောထားထင်မြင်ချက် စာတမ်းတွေ ပို့ပါ ဆိုတော့ . . . ကိုယ်ကလည်း လူငယ်ပဲကိုး၊ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ရှိတဲ့အတိုင်း ဟောဟောဒိုင်းဒိုင်း ရေးပို့ပေးလိုက်တယ်။ ဒါဟာ . . . ပါတီက မှားတာပဲ လို့ . . . ။ ကိုယ့်ဘက်က လုပ်ရမှာက အဲသည်ဆေးမှူးလိုမျိုး ရွာအိပ်ရွာစား ဘ၀င်တွေ့မနေကြဖို့ ပညာပေးရမယ်၊ ဘာ ညာ ပေါ့ . . . ။
ဒါနဲ့ ဘယ်ပြောကောင်းမလဲ။ ဌာနချုပ်က စာထွက်လာတာပေါ့။ ကိုယ်မှတ်မိသေးတယ်။ “ပုံစံကိုက တောသူကြီးသား လေသံမျိုးနဲ့ . . . ။ . . . ဒီလိုအမြင်မျိုးသည် တော်လှန်ရေးကို သစ္စာဖောက်ခြင်း တစ်မျိုးဖြစ် သည်။ . . . ။” ဘာဘာညာညာပေါ့။ ကိုယ့်ကို ပြန်လည်ဝေဖန်ထားတာ။ “ရဲဘော် . . . ၊ (တောကြီးတန်း) တောင်ပိုင်းခရိုင်မှနေ၍ အမြန်ဆုံးချီတက်လာပါ” ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုဆင့်ခေါ်တယ်။ ကိုယ်ကလည်း အင်း . . . အသတ်ခံရတော့မှာပဲ . . . လို့တွေးမိပြီး ကိုယ်မသွားဘူး။ နောက်တစ်ကြိမ် ဆင့်ခေါ်စာလာတယ်။ ကိုယ်မသွား ပြန်ဘူး။ ဒါနဲ့ သခင်စိုးက ကိုယ့်ကို အဝေးရောက်သေဒဏ် ချမှတ်လိုက်တယ်။ ပါတီဝင်တွေ အနေနဲ့ ကိုယ့်ကို တွေ့ရင်တွေ့တဲ့နေရာမှာ ကွပ်မျက်ပစ်ကြဖို့ပေါ့။ ဒါနဲ့ ကိုယ်လည်း ကိုယ့်မိတ်ဆွေပါတီဝင်တွေကိုလည်း ကိုယ်က အကပ်မခံတော့ဘူး။ သူတို့လည်း ကိုယ့်ကို ဘာမှတော့ မလုပ်ကြပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ကိုယ်လည်း သခင်စိုးရဲ့ သေဒဏ်ပေးခံရတဲ့ ပါတီဝင်တစ်ယောက် အနေနဲ့ အလံနီပါတီနဲ့ ကင်းကွာခဲ့ရတယ်။
၁၉၅၈-ခုနှစ်မှာ ကိုယ် အိုင်အေတန်း အောင်တယ်။ အိုင်အေတန်းပြီးတော့ နောက် နှစ်နှစ်လောက် အတန်းမတက် စာမေးပွဲမဖြေဘဲ နေခဲ့တယ်။ ၁၉၆၃-ခုနှစ်မှာ ကိုယ်ကျောင်းပြီးတယ်။ ကျောင်းပြီးကတည်းက သမ၀ါယမဦးစီးဌာနမှာ အလုပ်ဝင်လုပ်တယ်။ ဒီကြားထဲအတောအတွင်းမှာ ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးအဆက်အသွယ် တွေက မပြတ်မတောက်ဘဲ လှုပ်ရှားမှုတွေအတွင်းမှာ ရှိနေခဲ့တယ်။ သခင်စိုးတို့ဆီကခွဲထွက်လာတဲ့ ရခိုင်ပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ မြို့ပေါ်ယူဂျီနဲ့ နိုင်ငံခြားဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံအဖြစ်လှုပ်ရှားနေခဲ့တယ်။ ၁၉၆၆-ခုနှစ်မှာ ကိုယ်တစ်ခါ အဖမ်းခံရတယ်။ အဖမ်းခံရတဲ့အထိ သမ၀ါယမဌာနရဲ့ ၀န်ထမ်းအဖြစ် ကိုယ်ရှိနေခဲ့တယ်။
ရန်ကုန်မှာနေရတယ်ဆိုတော့ ရခိုင်သားပေမယ့်လို့ ဗမာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ အနေနီးတော့ ကြိုးချင်းထား ကြိုးချင်းငြိ ဆိုသလို နီးစပ်ဖူးတယ်။ ဗမာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ ညားလုညားခင် ညားလုညားခင်နဲ့ ဝေးခဲ့ရတာတွေ ရှိခဲ့ဖူးတယ်။
အဲဒီအထဲကတစ်ယောက်ကတော့ ဟိုစဉ်က သိပ်နာမည်မကြီးသေးတဲ့ ရုပ်ရှင်မင်းသမီး တစ်ယောက်ပေါ့။ ကိုယ်က သူရုပ်ရှင်ရိုက်တာကို မကြိုက်ဘူး။ သူက ကိုယ် နိုင်ငံရေးလုပ်နေတာကို မကြိုက်ဘူး။
မင်းရုပ်ရှင်မရိုက်ပါနဲ့တော့လား ဆိုတော့ ကျွန်မ အကယ်ဒမီတစ်ဆုရတဲ့အထိ အောင်မြင်အောင် လုပ်ချင်တယ်။ အကယ်ဒမီတစ်ဆုရရင်တော့ ရုပ်ရှင်ဆက်မရိုက်တော့ပါဘူးလို့ ဆိုတယ်။
ရှင် နိုင်ငံရေးမလုပ်ပါနဲ့တော့လား၊ ဘွဲ့ရပြီးတဲ့အခါ ၀န်ထမ်းဘ၀ အရာရှိဘ၀နဲ့ တင့်တောင့်တင့်တယ် အခြေတကျလေးနေကြတာပေါ့ ဆိုရင် ကိုယ်က မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဖြေတယ်။ ကိုယ့်လူမျိုးက ကျွန်ဖြစ်နေတဲ့ ဥစ္စာ ၊ ကိုယ်က ဘယ်လိုလုပ် လက်ပိုက်ကြည့်နေနိုင်မှာတုန်းလို့ ဘကြီးက ဖြေတယ်။
ဒါနဲ့ တိုတိုပြောရရင် ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်လမ်းခွဲကြတယ်လို့ပဲ ဆိုပါတော့ကွာ။ နောက်ပိုင်း သူလည်း အိမ်ထောင်ရက်သားကျ၊ ကလေးတွေ ဘာတွေ ထွန်းကား၊ အတည်တကျဖြစ်သွားတော့ ကိုယ်လည်းဝမ်းသာရတာပေါ့။
ဒီခေတ်ပိုင်း ဂျာနယ်လစ်တချို့က သူ့ကို အင်တာဗျူးလုပ်တာ ကိုယ်ဖတ်ရတယ်။ သူတို့က မေးကြတယ်။ အကယ်ဒမီတစ်ဆုရပြီးနောက်ပိုင်း အမေဘာကြောင့် ရုပ်ရှင်ဆက်မရိုက်တော့တာလဲ တဲ့ . . . ။
အမေ လူတစ်ယောက်ကို တစ်ခါက ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ ကတိတစ်ခု ရှိလို့ပါ . . . တဲ့။
၁၉၅၆-ခုနှစ် အောင်မာဃ ထိုးစစ်အတွင်းမှာ အလံနီဌာချုပ်ကို ထိုးစစ်ဆင်တာကို ခံရပြီးနောက်ပိုင်း၊ အလံနီဌာနချုပ် ဟိုပြောင်း သည်ရွှေ့ တရွေ့ရွေ့နဲ့ ရခိုင်မှာ အခြေစိုက်တယ်။ အလံနီဌာနချုပ်ဆိုတာ ဘာလဲ လို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ရရင် သခင်စိုး စခန်းချ နေထိုင်တဲ့နေရာဟာ အလံနီဌာနချုပ်ပါပဲ။
တစ်ချက်လွှတ် သတ်မိန့်ပေးဖို့ ဘယ်တော့မှ နှုတ်မနှေးတဲ့ သခင်စိုးရဲ့လက်အောက်မှာ ရခိုင်အလံနီရဲဘော် တော်တော်များများ ဟိုတစ်ခါ သည်တစ်ယောက် ဆိုသလို အသတ်ခံကြရတယ်။ “လူမျိုးရေးအမြင်ကျဉ်းဝါဒီတွေ” ၊ “ပစ္စည်းမဲ့ အာဏာရှင်ဝါဒကို ဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေ” အစရှိတဲ့ စကားလုံးကြီးကြီးတွေ သုံးပြီး ကွပ်မျက်ခံရတယ်။ သုတ်သင်ခြင်းခံရတယ်။
ဒီတော့ နောက်ဆုံး ရခိုင်ရဲဘော်တွေကလည်း ဆက်လက် သည်းညဉ်းမခံနိုင်တော့ဘူး။ ကိုမောင်ဟန်ဟာ လူ(၄၀) လက်နက်(၄၀) လောက်ကို ဦးဆောင်ပြီးတော့ ပေါက်တောမြို့နယ် ဖဒူကျွန်းကို ပြောင်းရွေ့အခြေစိုက်တယ်။ သူ့အနေနဲ့ ဘာဆက်လုပ်ရမှန်း အသေအချာတော့ မသိဘူး။ ဒါပေမဲ့ သေချာတာတစ်ခုကတော့ သခင်စိုးရဲ့ အလံနီကွန်မြူနစ်ပါတီကနေ ခွဲထွက်လာတာပဲ။ ဖဒူကျွန်းမှာ သူ့မိန်းမနဲ့ မိန်းမဆွေမျိုးတွေ ရှိတော့ ဒီနယ်ကို အခြေခံမယ် ဆိုပြီး သူပြောင်းလာတာ။
သခင်စိုးရဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတပည့်ရင်း ရဲနီကျော်ဇံရွှီရယ်၊ ရခိုင်ရဲဘော် ခြောက်ယောက်ရယ်ပဲ ဌာနချုပ်မှာကျန်ခဲ့တယ်။ ရဲနီကျော်ဇံရွှီက သခင်စိုးကို ကြောက်ကြောက်နဲ့ ဖျောင်းဖျရတယ်။ “ဆရာကြီး . . . ၊ မောင်ဟန် က လူငယ်ဆိုတော့ စိတ်မြန် လက်မြန်နဲ့ တဇွတ်ထိုးလုပ်တတ်လို့ အခုလိုဖြစ်သွားရတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်က စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ ပြောပြရင် သူတို့လက်ခံကြမှာပါ” ဆိုပြီး သခင်စိုးကို နားသွင်းတယ်။ အေး . . . ၊ မင်းသွားပြီး ပြန်လာဖို့ခေါ်လို့ ရနိုင်ပါ့မလား။
အေး မင်းသွားပြီး သူတို့ကို နားချခေါ်လာခဲ့။ လိုတဲ့လူတွေ ခေါ်သွား . . . ဆိုတော့ ဌာနချုပ်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ရခိုင်ရဲဘော် ခြောက်ယောက်ကို ခေါ်ပြီး၊ ရဲနီကျော်ဇံရွှီ ဖဒူကျွန်းကို ပေါက်ချလာပါလေရော။ ဒါပေမဲ့ ရဲနီကျော်ဇံရွှီတို့အုပ်စုကို ကိုမောင်ဟန်တို့က တွေ့တာနဲ့ ၀ိုင်းထားပြီး သေနတ်နဲ့ ချိန်ထားတော့တာပါပဲ။ “ရပ်။ ဘာမှ ထွေလီကာလီ လျှောက်ပြော မနေနဲ့။ ခင်ဗျားကို သခင်စိုးလွှတ်လိုက်တာပဲ ဖြစ်ရမယ်။ ခင်ဗျားက သခင်စိုး လူပဲ” စသည်ဖြင့် တားဆီးပြီး ရန်ရှာတော့တာပါပဲ။
အဘိုးကြီး ရဲနီကျော်ဇံရွှီက အလောတကြီး ရှင်းပြရတယ်။ “ဟေ့ . . . မောင်ဟန်ရေ . . . ၊ နေပါဦးကွ။ ငါတို့လည်း ဌာနချုပ်မှာ ဆက်နေရင် သခင်စိုးသတ်လို့သေရတော့မယ်။ မင်းတို့လူငယ်တွေ ထွက်သွားတော့ ငါက တစ်ပတ်လှည့်နဲ့ လွှတ်လိုက်တာလို့ သခင်စိုးက မထင်ဘဲ နေပါ့မလားကွ။ ဒါနဲ့ ငါလည်း သခင်စိုးကို အယုံသွင်းပြီး အသာကလေး လစ်လာရတာ” လို့ ရှင်းပြရတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ရခိုင်ဘက်ကို ရောက်နေတဲ့ အလံနီကွန်မြူနစ်ပါတီဟာ ရခိုင်-ဗမာ နှစ်ခြမ်းကွဲပြီးတော့ ရခိုင်ပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (Arakan Communist Party) ဆိုတာ ပေါ်ပေါက်လာတယ်။ ရဲနီကျော်ဇံရွှီက လူကြီးဆိုတော့ သူ့ကိုပဲ ခေါင်းဆောင်တင်ရတာပေါ့။ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းထဲက လူငယ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ ကိုမောင်ဟန်တို့ ကိုရွှေသာတို့ကလည်း ဘကြီးကို လှမ်းဆက်သွယ်တယ်။ (ကိုမောင်ဟန်က ရသေ့တောင်မြို့နယ် သမီးလှရွာသား၊ ကိုရွှေသာက အရင်တုန်းက ရခိုင်သောတုဇနအဖွဲ့မှာ ပါဖူးတယ်။) သူတို့ကပြောတယ်။ ကိုယ့်လူရေ . . . ကွန်မြူနစ်ဝါဒနဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒကို ပေါင်းစည်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ အချိန်ကောင်းကို ရောက်လာပြီ။ သူတို့နဲ့ လက်တွဲပါပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ ကိုယ်လည်း ရခိုင်ပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (A.C.P. ၊ဒါမှမဟုတ်၊ ရကပ) ရဲ့ နိုင်ငံခြားဆက်သွယ်ရေးကို တာဝန်ယူရတဲ့ မြို့ပေါ် ယူဂျီခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတယ်။ (ရခိုင်ပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီအကြောင်းကို ဓါတ်ပုံပါ မှတ်စုတါင်ကြည့်ပါ။)
၁၉၆၆-ခုနှစ်မှာ ကိုယ် ယူဂျီလုပ်နေတာကို အုပ်မိသွားလို့ အဖမ်းခံရတယ်။ ထောင်လေးနှစ်လောက်ကျတယ်။ ထောင်ကလွတ်လာတော့ စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီး ကိုယ့်ဘ၀ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ဖူး သေးတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။
ဘကြီး ပတမဆုံးချခဲ့တဲ့ ဥယျာဉ်စိုက်ခင်းဟာ ဘူးသီးတောင်ဘောလုံးကွင်းနားမှာပေါ့။ နာနတ်၊ လိမ္မော်၊ ရှောက် အစရှိသည်အားဖြင့် စိုက်တယ်။ ကြက်မွေးမြူရေးလည်းလုပ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီတုန်းက ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိဖြစ်တဲ့ ဘူးသီးတောင် မလကဥက္ကဌ ဗိုလ်ကြီးအောင်ဖြူက ဒီခြံကွက်ဟာ မြို့ပြဧရိယာထဲမှာ အကျုံးဝင်နေတယ်၊ ဒါကြောင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး မလုပ်ရဘူး ဆိုပြီး အကြောင်းကြားတယ်၊ တားမြစ်တယ်၊ ရာဇသံပို့တယ်နဲ့ . . . နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ်လည်း ထားလိုက်ပါတော့ကွာ ဆိုပြီး ခြံကို ဖျက်တယ်။ နာနတ်သီးတွေကို အကုန်ခုတ်ပြီး ယူချင်တဲ့လူ လူပေတော့ ဆိုပြီး ချောင်းနားမှာ ပစ်ထားလိုက်တယ်။ ကိုယ့်ဆီမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ ကုလားလေးဆိုရင် အဲသည်နေ့က ထိုင်ငိုနေလိုက်တာ ပြောမနေနဲ့တော့ . . . ။ သူနဲ့ ကိုယ်နဲ့ နှစ်ဦး လုပ်အားထည့်ပြီး ပျိုးထောင်လာခဲ့တဲ့ ခြံကိုးကွ။ ကိုယ့်မှာလည်း လုပ်ငန်းဆုံးရှုံးတယ်။ သူ့မှာလည်း အလုပ်ဆုံးရှုံးတယ်။ နှစ်ဦးစလုံး အတူ ဆုံးရှုံးတာကတော့ ကိုယ့်လက်ကိုယ့်ခြေနဲ့ ပျိုးထောင်လာခဲ့တဲ့ အသီးအပွင့်တွေကို ဆုံးရှုံးဝကတာပါပဲ။ ၀မ်းနည်းတာပေါ့။
ပြီးတော့ နောက်တစ်ခါကျတော့ ရသေ့တောင်မြို့နယ် စေတီပြင်မှာ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ဖို့ အားထုတ်ပြန်တယ်။ ကိုယ့်ညီမ မကျော့စိန်က စေတီပြင်ကျေးရွာမှာ သူနာပြုအနေနဲ့ တာဝန်ကျတယ်။ ကိုယ်က အဲသည်ရွာမှာ ရဲစခန်းနဲ့ ဓါးလွယ်ခုတ်က ချောင်းကမ်းစပ်နေရာကို မျက်စိကျမိတယ်။ ကိုယ်က ရန်ကုန် သာကေတမှာလည်း ဘဲမွေးမြူရေးလုပ်ဖူးတယ်။ ရေတက်ရေကျရှိတဲ့နေရာဆိုရင် ဘဲမွေးရတာ အဆင်ပြေတယ်။
ဒါနဲ့ ကိုယ်လည်း အဲသည်နေရာမှာ ဘဲမွေးမြူရေးနဲ့ ခြေလှမ်းစပြန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သိပ်မကြာပါဘူး။ အတိုက်အခိုက်က ပေါ်လာပြန်တော့တယ်။ အဲသည်ရွာမှာက ပြောက်ကျားအလင်းဝင်တစ်ယောက်ရှိနေတယ်။ ကိုယ်ဟာ ကိုယ့်ညီမကတစ်ဆင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာတွေက အလံနီတွေနဲ့ ဆက်သွယ်နေပါတယ် ဆိုပြီး အဲဒီလူက ရဲစခန်းကို တိုင်တယ်။ ဒီတော့ အဲသည်က ရဲတွေက ကိုယ့်ကို လာပြောကြတယ်။ “ဆရာရယ် . . . ၊ ဆရာနေရာပြောင်းပြီး အလုပ်လုပ်ရင်ကောင်းမယ် ထင်ပါတယ်” လို့ ဆိုလှာပြန်တယ်။ အနီးအနားက ကျေးရွာတွေမှာ အလံနီတွေ ရှိနေတ၃ာလည်း အမှန်ပဲ။ ကိုယ်ကလည်း အလံနီလူထွက် ဖြစ်နေတာကလည်း အမှန်ပဲ။ ဒီတော့ ရှင်းရခက်နေတာပေါ့။
ရဲစခန်းကရှင်းပြတာက ဒီလိုပါ။ ဆရာရယ်၊ အဲသည်ပုဂ္ဂိုလ်က အခုလောလောဆယ် ကျွန်တော်တို့ကို တိုင်နေတာဆိုတော့ တော်သေးတယ်။ နောက်ပိုင်း မြို့ကိုသာ သွားတိုင်ရင် ကျွန်တော်လည်း ရှင်းရခက်တော့မှာ . . . ဆိုပြီး ပြောပြတယ်။ ဒါနဲ့ နောက်တစ်ကြိမ် ကိုယ့်လုပ်ငန်းကို ဖျက်ရပြန်တယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ စစ်တွေမျြု့ပေါ် ပြန်တက်ပြီး ကျူရှင်ဆရာဖြစ်ရတော့တာပါပဲ။ စစ်တွေ မောလိပ်ရပ်ကွက် သုံးထပ်တိုက်ဟောင်းကြီးရဲ့ အပေါ်ဆုံးထပ် လေးလွှာမှာ စာပြပြန်တယ်။ စစ်တွေမှာ တိုက်တွေရှားတဲ့ခေတ်က သုံးဆင့်တိုက် လို့ လူတွေက ခေါ်ကြတဲ့ အဆောက်အအုံပေါ့။ (အဲသည် သုံးထပ်တိုက်မှာ ကျွန်တော် အသက် ဆယ့်သုံးနှစ်သားအထိ နေခဲ့တယ် လို့ စာရေးသူက ကြားဖြတ်ဝင်ပြောပါတယ်။)
တောမှာနေတုန်းက အကောင်းသား၊ စစ်တွေကို ကျောင်းဆရာဘ၀နဲ့ ရောက်လာတော့မှ နိုင်ငံရေးအလုပ်နဲ့ ထဲထဲဝင်ဝင် ဖြစ်သွားပါလေရော။ ဒီမှာက ကိုယ့်လူတွေကို အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ ပြန်တွေ့ရတာကိုး။ လှုပ်ရှားမှုတွေက များလွန်းတော့ အစိုးရက တချို့အချိတ်အဆက်တွေကို မိသွားရာကနေ ကိုယ့်အနေနဲ့ ယူဂျီဘ၀နဲ့တောင် မနေနိုင်တော့ဘဲ ထွက်မပြေးရင် မရတော့တဲ့ အခြေအနေဆိုက်လာတယ်။ ဒါနဲ့ ၁၉၇၂-ခုနှစ်မှာ ဘကြီး ပြန်လည် တောခိုခဲ့တယ်။ မင်းသူငယ်ချင်း ကိုယ့်သားဦးလေး ငြိမ်းချမ်းဦး သုံးလသားအရွယ်မှာ ဘကြီးလည်း မလွဲမရှောင်သာ တောခိုခဲ့ရပြန်တယ်။
ငြိမ်းချမ်းဦးရဲ့အမေက ကိုယ့်ရဲ့ ပထမအိမ်ထောင်ပေါ့။ ကိုယ်တောခိုနေစဉ်ကာလမှာ ငြိမ်းချမ်းဦးအမေက နောက်အိမ်ထောင်ပြုသွားခဲ့တယ်။ ကိုယ်တော့ အပြစ်မတင်ချင်ပါဘူး။
ဘကြီးတို့ ရခိုင်လူမျိုး မြန်မာလူမျိုးတို့ အဖို့မှာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာ အားကိုးအားထားရာ ရှာကြတဲ့ သဘောပဲလေ။ ကိုယ်အိမ်ထောင်ပြုလိုက်တဲ့လူက အားကိုးအားထားပြုလို့မရတဲ့အတွက် အားကိုးအားထားနောက်တစ်ယောက်ရှာသွားတာကိုတော့ ဘကြီးခွင့်လွှတ်ပါတယ်။
(အပိုင်း-သုံးကို ဆက်လက် ဖတ်ရှုပါရန်)
Previous စံရှမေောငျ ၊သို့မဟုတျ၊ လကျနကျခြ ရကပ ကြားနာတဈကောငျ (အပိုငျး တဈ)
Next စံရှမေောငျ (သို့မဟုတျ) လကျနကျခြ ရကပ ကြားတဈကောငျ (အပိုငျး-သုံး)